Darpan Nepal – ओठमा दल्ने लिपबाम : जानिराख्नुस् तपाईंले नसोचेका अरु १० काम
ओठमा दल्ने लिपबाम : जानिराख्नुस् तपाईंले नसोचेका अरु १० काम
Jul 19, 2018adminIntresting fact0Like
अधिकांशको साथमा हुन्छ लिप बाम । ओठ फुट्न नदिन तथा फुटेको ओठ नरम बनाउन लिप बाम प्रयोग गरिन्छ । तर, लिप बामको फाइदा ओठका लागि मात्रै छैन । यसको १० उपयोगीता पढिसकेपछि, अझ प्रयोग गरेपछि तपाईं पक्कै अचम्ममा पर्नुहुन्छ :
Previous Postके रेखा थापा ‘मेगास्टार’ हुन् ? Next Postछोरीको बिस्तारा बाट यस्तो चिज निस्कियो…अन्तिम मा पुलिस नै आउनुपर्यो !! के थियो आखिर ?सुनेर तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुस [ भिडियो सहित ]